Jawaabtii Ali yusuf iyo shirkii jaaliyadaha soomaalida Ogadenya.
Qore. Maxamed Cabdi | gammaan@hotmail.com
Marka hore waxaan salaan diiran usoo gudbinayaa maamulka sharafta leh ee Somalitalk, waxaana ugu hambalyeynayaa sida geesinimada leh ee ay u gudanayaan mihnadooda saxaafadeed.
Hadii aan usoo laabto nuxurka mowduucan oo ah mid aan ugu jawaabayo maqaal uu qoray ninka lagu magacaabo Ali Yusuf, oon u arko inuu si xaqiiqada ka fog uga hadlay Jaaliyadaha soomaalida Ogadenya iyo shirarka ay sanad walba ku qabtaan wadamada dibada.
Ugu horayntii waxaan leeyahay Caliyow xiligan aan joogno waa laga gudbay Jaaliyadihii ujeeda badan. Waxaan ka wadaa jaaliyadihii hore eed ka sheekaysay waxay u badnaayeen kuwo aan lahayn hadaf iyo ujeedo cad, ama wax qabad ku salaysan sidii shacabkeenu Gumaysiga uga bixi lahaa.
Waxaad sheegtay in jaaliyadihii hore laga heli jirey dad fikrada kala duwan aaminsan, fikradahaas sida hadalkaaga ka dhadhamaysa waxaa weeye matalan. Qaar waxay rabaan inay gumaysiga Itoobiya la dagaalamaan isla markaana halganka socda taageeraan. Qaarna waxay rabaan in Itoobiya wax lala qabsado oo horumar iyo wax la mid ah ayay ka hadlayaan. Kuwo kalena waxay aaminsanyihiin inaan Ogadenyaba laga hadlin ee soomaaliya iyo dagaalka sokeeye ee ka jira lagu mashquulo.
Hadaba adaan ku waydiiyaye siday sadexdaa fikradood hal jaaliyad uga wada shaqayn kartaa?
Markaa isbadelka dhacay ee adiga iyo inata kula midka ah u cuntami la waxaa weeye, dadkii waxay fahmeen inayna jaaliyadaha noocaas ah ee nin waliba wadaanta dhinaciisa kaga ridanayo wax wanaag ah ama horumar ah kasoo soconin, sidaa darteed in lakala miirmo oo nin waliba fikrada uu aaminsan yahay daacad u noqdo.
Markaa adiga Cali ahaan hadaad aaminsan tahay in Ogadenya mashaariic iyo horumarin laga sameyn karo taas macnaheedu waxaa weeye gumaysi ma jiro, sababtoo ah waxaa xaqiiqa ah in meel gumaysi ka jiro aan horumar laga gaadhi karin, gaar ahaan gumaysiga Itoobiya.
» Shirka Jaaliyadda Ogaadeenya oo Isubedeley shibrayohow heesa
Waxaan aaminsanahay in isbedelka jaaliyadaha soomaalida Ogadenya sameeyeen dhowrkii sano ee ugu dambeeyay inuu yahay wax aad loogu farxo cadowguna ka naxo, waxayna ku talaabsadeen xowli iyo wax qabad dhab ah, gaar ahaan dhinaca taageerada halganka gobanimadoon ee shacbkeenu ku jiro iyo muujinta dhibaatada gumaysigu ku hayo.
Shirweynaha sanad walba jaaliyadaha Ogadenya qabtaan wuu ka qiima sareeyaa sidaad ku tilmaantay, waxaana filayaa hadaad kasoo qayb gasho inuu wax badan aragtidaada iska bedeli lahaa. Wuuna u furan yahay cid kasta oo ka madax banaan gumaysiga Itoobiya ama aan dabadhilif u ahayn. Ugu dambayntii Caliyow hadaad aaminsantahay in horumar wadanka Ogadenya laga hirgelin karo iyadoo gumaysigu haysto waxaad dhegaysataa warbixintii iyo qudbadii Maxamuud Ugaas godoomiyihii Hay,ada samafalka ee OWS uu ka jeediyay shirkii Stokholm ee u dambeeyay. iyo qudbadii Hay,ada xuquuqul insaanka Ogadenya OHRC.
Markaa ka dib isbarbar dhig waxaad ka hadashay iyo xaqiiqda jirta.
Qore. Maxamed Cabdi
Heshiiskii Tripartite Accord" Ka akhri halkan...